Hogaamiyaha mucaaradka ee Ruushka oo lagu daweynayo dalka Jarmalka | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Hogaamiyaha mucaaradka ee Ruushka oo lagu daweynayo dalka Jarmalka
Hogaamiyaha mucaaradka ee dalka Ruushka Alexei Navalny oo xanuunsaday maalma kahor ayaa la geeyay dalka Jarmalka, si halkaas loogu daweeyo.
Navalny ayaa ku jira xalad miir daboolan ah, waxaana diyaarad gaar ah looga qaaday dalka Jarmalka.
Xukuumadda Moscow ayaa la sheegay inay oggolaatay in dalka dibadiisa lagu soo daweeyo.
Dadka la shaqeeya waxay shegeen inay ka shaki qabaan in la sumeeyay, waxaana dowladda ay ku eedeeyeen inay isku dayayaan inay daboolaan wixii ku dhacay.
Dhakhaatiirta ku daweneysa Navalny gudaha dalka Ruushka ayaa soo jeediyay in uu aad u xanuunsan yahay, una baahan yahay in la geeyo gooba kale oo wax looga qaban karo xaaladiisa.
Haseyeeshee markii dambe waxaa ay sheegeen in xaaladiisa ay soo wanaagsanaatay. Xaaskiisa Yulia ayaa ula safartay dalka Jarmalka.
Diyaaradda looga soo qaaday Ruushka ayaa waxaa usoo kireeyay hey’ad ka shaqeysa arrimaha nabadgelyada, waxaana laga dejiyay garoonka diyaaradaha ee Tegel ee Berlin. Markii laga qaaday garoonka ayaa durbadiiba waxaa horay laga geeyay isbitaalka Charité.
Asaasaha hey’adda fududeysay gargaarka caafimmaad ee loo fidiyay Navalny, Jaka Bizilj waxaa uu warfidiyeenada u sheegay in “xaaladda Navalny ay tahay mid aad u daran”.
“Ma ahan oo keliya in aan isweydiino in uu noolaanayo iyo inkale ee waa in aan isweydiinaa dhibaatada gaartay inta ay la egtahay.”
Dhakhtarka gaarka ah ee Nvaalny, Anastasia Vasilieva, ayaa loo diiday in uu arko bukaankiisa intii uu ku sugnaa Ruushka, waxaase uu shegay in uu rajeynayo in uu caafimmaadi doona mar haddii la geeyay Jarmalka.
“Waxaan hubaa in ay daweyn karaan oo jirkiisa ka saari karaan waxwalba oo gudaha u galay.”
Kahor inta aanan laga qaadin dalka Jarmalka, shaqaalaha caafimmaadka ee la tacaalayay xaaladiisa waxaa ay sheegeen in xaaladiisa aanay sidaa khatar usii ahayn.
Qoraalka sawirka,Alexei Navalny oo laga dejiyay dalka Jarmalka
Mr Navalny oo madax ka ahaa olole looga soo horjeedo musuqmaasuqa la sheegay in ay ku kacdo dowladda Ruushka ayaa xanuunsaday xilli uu saarnaa diyaarad, waxaana si degdeg ah diyaaradda loogu dejiyay magaalada Omsk ee dalka Ruushka, halkaas oo dhakhaatiirta caafimmaadka ay sheegeen in uu galay kooma, ayna ku dedaalayaan sidii loo badbaadin lahaa noolashiisa.
Koox la shaqeysa isaga waxay sheegeen inay tuhmayaan in shaah uu ka cabay maqaaxi ku taalo garoonka wax loogu daray. Ilaa iyo hadda se ma jirta cid kale oo ka hadashay waxa ku dhacay Navalny.
“Waxaan u maleynaynaa in la sumeeyay islamarkana shaah wax loogu daray,” ayay tiri Ms Yarmysh oo ah afhayeen u hadashay hey’adda uu la shaqeynayay Navalny.
Waxaa kale oo ay intaa raacisay in Mr Navalny uu doonayay in uu dib ugu soo laabto magaalada caasimadda ee Moscow, wuxuuna kasoo safray isla magaalada hadda uu ku xanuunsan yahay.
Aqalka Kremlin-ka ee looga arrimiyo dalka Ruushka oo ka hadlay arrintan ayaa sheegay “inay caafimmaad u rajeynayaan” hogaamiyaha xanuunsanaya.
Mr Navalny ayaa ah nin si weyn u dhaliila madaxwaynaha Ruushka Vladimir Putin oo in muddo soo maamulayay dalkaas, isagoona soo qabtay xilal kala duwan.
Mr Navalny, oo 44 sano jir ah ayaa muddo sanado ah waxaa uu laf dhuun gashay ku ahaa madaxweyne Putin. Bishii Juun, isbadel lagu sameeyay dastuurka dalkaas ayuu ku tilmaamay “afgembi iyo xadgudub ka dhan ah” dastuurka.
Isbadelka lagu sameeyay dastuurka Ruushka ayaa madaxweynaha dalkaas, Mr Putin u oggolaanaya in uu xafiiska sii joogo kadib marka uu dhammaado muddo xileedkiisa.
Xoghayaha arrimaha dibadda ee Britain, Dominic Raab oo ka hadlay xaaladda Navalny ayaa sheegay “in uu aad uga walaacsan yahay” xaaladdiisa iyo in la sumeeyay.
Mr Alexei Navalny oo ah hogaamiyaha mucaaradka ee Ruushka oo ah dal uu xifaaltan badan kala dhaxeeyo dalalka reer galbeedka ayaa xabsiga la dhigay dhowr jeer, walow markii dambe lasii daayay.
Inkastoo dadka wax fallanqeeya ay ku tilmaaman hogaamiye ay ka awood badan tahay dowladda uu dhaliilo, haddana waxaa marar badan uu hogaamiyay dibadbaxyo ballaaran oo looga soo horjeedo xukuumadda Moscow, waxaase aan la ogeyn waxa ay xaaladiisa ku dambeyn doonta.
Hogaamiyaha mucaaradka ee Ruushka oo lagu daweynayo dalka Jarmalka was last modified: August 23rd, 2020 by Admin
Maxay ka wada hadleen Kheyre iyo Qoorqoor ?
Akhriso:¬-Maraykanka oo ku tilmaamay weerarkii lagu qaaday Saakow mid jawaab u ah Alshabaab